﻿﻿	ဟော်မုန်းပါသော IUD (သားအိမ်တွင်းထဲ့ကရိယာ) | Find My Method
ဟော်မုန်းပါသော IUD (သားအိမ်တွင်းထဲ့ကရိယာ)
ဖျောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ သေးငယ်သောT-ပုံပလပ်စတစ်ပစ္စည်းကို သင်၏သားအိမ်တွင်း ထည့်ထားပြီး progestogen ဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်စေသည်
ထိရောက်မှု- IUD သည်အထိရောက်ဆုံးသောနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးသူ ၁၀၀ တိုင်းမှာ ၉၉ ဦးဟာ ကိုယ်ဝန်ကို တားဆီးဖို့ စီမံနိုင်ပါမယ်
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ – သင်မှာ အနဲငယ်အောင့်ခြင်း၊ သွေးစက်ကျဆင်းခြင်းနှင့် ရာသီလာနဲခြင်းများ ရှိနိုင်သည်။
အားထုတ်ရမှု- နိမ့်။ တခါထည့်ထားပြီးလျှင် အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ၃နှစ် ၄နှစ် သို့မဟုတ် ၅ နှစ်ထိ ကြာကြာခံသည်
လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ (STIs) မှကာကွယ်ခြင်းမရှိပါ
အရေးပေါ်သန္ဓေတားခြင်းအတွက်အလုပ်မဖြစ်ပါ။ ဟော်မုန်းမပါသော IUD ကိုအစားသုံးပါ။
IUD (levonorgestrel သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း) သည် ဟော်မုန်းပါသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော T-ပုံပလပ်စတစ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ IUD ကိုသားအိမ်ထဲသို့ထည့်ထားသည်။ ထိုနောက်တွင်၄င်းသည်သားအိမ်နံရံကိုပိုမိုပါးလွှာစေပြီး သားအိမ်ခေါင်း၏ချွဲကိုပိုထူစေသည်။ ထိုဖြစ်စဥ်က သုတ်ပိုးကို မျိုးအောင်ခြင်းမဖြစ်အောင် တားဆီးပေးသည်။ IUDs များသည် (အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍) ၃နှစ် ၄နှစ် သို့မဟုတ် ၅ နှစ်ကြာ ကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။ သင်ကိုယ်ဝန်ရလိုလျှင် IUD ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
သုံးပြီး မေ့ထားလိုက်နိုင်၏။ သန္ဓေတားနည်းကိုမှတ်မထားလိုပါက IUS သည်သာ သင်အတွက် ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုထည့်ပြီး ၃ နှစ်မှ ၇ နှစ်အထိထားနိုင်သည်။
လုံးဝ မသိနိုင်။ သင့်တွင် IUS ရှိသည်ဟု ဘယ်သူမှမပြောနိုင်။ ထုပ်ပိုးထားစရာ၊ လိင်မဆက်ဆံခင်လေးတွင် လုပ်စရာ ဘာမှမလို။
အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်လုံခြုံပြီးစိတ်ချရ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ကိုယ်ဝန်မရှိဖူး၊ ကလေးမရှိဖူးသည့်တိုင် ၎င်းသည်မှန်ကန်စိတ်ချရသည်။
ကျွမ်းကျင်သူအများစုက ကျန်းမာပြီး သားအိမ်ရှိလျှင် IUD နှင့် အသင့်တော်ဆုံးဟု သဘောတူကြသည်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ကိုယ်ဝန်မရှိဖူး၊ ကလေးမရှိဖူးသည့်တိုင် ၎င်းသည်မှန်ကန်စိတ်ချရသည်။ ၎င်းသည် မိခင်အသစ်များအတွက် (သင်နို့တိုက်နေလျှင်တောင်မှ) ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်အတွက်မေးစရာ။ IUS ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ရလွယ်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင် IUS ကိုထုတ်ယူပြီးသည်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါက အခြားနည်းလမ်းတခုခုဖြင့် ကာကွယ်ထားရှိရန်သေချာပါစေ။
ရရှိနိုင်မှု။ သင် ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးချင်ပါသလား? ဤနည်းလမ်းကိုနိုင်ငံများစွာ၌ရရှိနိုင်သည်။ သင်၏ဒေသဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနများ၌သာမေးမြန်းပါ။
IUS ရရှိရန် ပထမခြေလှမ်းမှာ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့် စကားပြောရန်ဖြစ်သည်။ သူက သင့်အားမေးခွန်းများမေးပြီး IUS သည်သင့်အတွက် သင့်လျော်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပေးလိမ့်မည်။.
သင် IUS ကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုထည့်နိုင်သည်။ အချို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများက ရာသီလာချိန်မှာ ၎င်းကို ထည့်သွင်းလိုသော်လည်း၊ သင့်တွင်ကိုယ်ဝန်မရှိကြောင်း သေချာသရွေ့ ဘယ်အချိန်မဆိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ရာသီအလယ်တွင်ပြုလုပ်ရန်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် (ဆိုလိုသည်မှာသင်၏သားအိမ်ခေါင်းဝ အပွင့်ဆုံးအချိန်ခါ) ။
IUS ကိုထည့်သောအခါ အနည်းငယ်အောင့်ခြင်းကို ခံစားရလေ့ရှိသော်လည်း အနားယူပြီး သို့မဟုတ် နာပျောက်ဆေးများဖြင့် သက်သာသွားလိမ့်မည်။ အချို့အမျိုးသမီးများသည် မူးဝေဝေခံစားရနိုင်သည်။ IUS အထဲသို့ရောက်သည်နှင့် သင်၏လိင်အင်္ဂါထဲသို့ တွဲကျထားသောကြိုးငယ်လေးကို သင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ထိုအရာဖြင့် IUS ကို နောက်ပိုင်းတွင် ဖယ်ရှားနိုင်အောင်ပင်ဖြစ်သည်။ (ကြိုးလေးများသည်လိင်အင်္ဂါအပြင်ဘက်ထွက်မလာပါ။) 
ကြိုးလေးများကိုစမ်းကြည့်ပါ။ စမ်းမိလျှင် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သင့် IUS ဟာ အဆင်ပြေပြေရှိနေပါတယ်။ သို့သော် IUS ၏အမာပိုင်းကို သားအိမ်ခေါင်းတွင်စမ်းမိလျှင်၊ ၎င်းကိုချိန်ညှိဖို့ (သို့) အစားထိုးဖို့လိုကောင်းလိုမည်။
ကြိုးများကိုမဆွဲပါနှင့်။ ဆွဲပါက IUS သည် နေရာမှရွေ့ထွက်သွားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကြိုးများကိုစစ်ဆေးရန်အဆင်မပြေပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအား ထည့်သွင်းပြီးနောက်တစ်လ၊ ထို့နောက်နှစ်စဉ် စစ်ဆေးစေနိုင်သည်။
ကောင်းတဲ့အချက်များ – IUDs နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သာမကသင်၏လိင်မှုဘဝအတွက်ကောင်းမွန်သောအရာများစွာရှိသည်။.
၎င်းသည် သားအိမ်ခေါင်းနှင့် သားအိမ်တွင်းကင်ဆာကို ကာကွယ်ရန်ကူညီရာရောက်နိုင်သည်
၎င်းသည် endometriosis သားအိမ်ရောဂါလက္ခဏာများကို လျော့နည်းစေသည်
မကောင်းတဲ့အချက်များ – လူတိုင်းဟာ အနုတ်လက္ခဏာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို စိုးရိမ်ကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးများစွာအတွက်မူ ၎င်းတို့သည်ပြသနာမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသမီးအများစုဟာ IUD ကို တော်တော် မြန်မြန် အသားကျလာသော်လည်း အဲလိုဖြစ်ရန် လအနည်းငယ်ကြာနိုင်တယ်။
သွေးဆင်းခြင်းအပြောင်းအလဲများ ဖြစ်တတ်သော်လည်းအန္တရာယ်မရှိပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် နဲပါးပြီး ရက်အနည်းငယ်သာ သွေးဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် မကြာခဏ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲသွေးဆင်းခြင်း
IUS သည် သားအိမ်နံရံကိုတွန်းတင်နေခြင်း
IUD က သင့်အဖော်ကို မနာကျင်စေသင့်ပါ။ IUS ကြိုးလေးများသည် လိင်ဆက်ဆံစဉ် ယောက်ျားများကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု သင်ကြားဖူးပေမည်။ သို့သော် အများစုသည် ထိုကြိုးများကို မခံစားရပါ။ သင့်အဖော်က ၎င်းအနှောင့်အယှက်များကိုခံစားမိပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါက သင်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူက ၎င်းတို့ကို တိုပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျော့ပြောင်းလာတတ်သည်။
အကယ်၍ ရာသီလာချိန် အောင့်တာများလာရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
လအနည်းငယ်စမ်းကြည့်ပါ၊ ibuprofen အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို သင့်ရာသီ၏ပထမရက်ပိုင်းမှာ သောက်ပါ။ အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ IUD ကို သုံးရလွယ်ပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက အချိန်နဲ့အမျှသက်သာမလာ ဒါမှမဟုတ် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေနဲ့ပိုကောင်းမလာရင် implant ကို ပြောင်းစမ်းကြည့်ပါ
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအား IUD ကိုဖယ်ရှားရန်ပြောပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ် အမြန်ဆုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သင့်ပြီး ချက်ချင်း စတင်ကြိုးစားနိုင်ပြီ။
IUD ထည့်တာက နာမလား။
IUD ထည့်ရာမှနာကျင်မှုသည် တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပင် ထည့်သွင်းရာ၌နာကျင်မှုနဲစေသော တကယ့်ဆေးဝါးမရှိပါ။
မထည့်မီကထဲက ibuprofenအကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ကို ကြိုသောက်ထားပြီး သင်၏သားအိမ်ခေါင်းပွင့်ချိန် ဥပမာ ရာသီလာစဥ် (သို့) မျိုးဥကြွေစဥ်အချိန် IUD ထည့်သွင်းစေနိုင်သည်။ နာကျင်မှုအချို့ရှိလျှင်ပင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်ဝန်ကင်းသော လိင်ဆက်ဆံရေးအတွက် အကျိုးရှိသည်။
ကျွန်ုပ်၏ IUD အားဖယ်ရှားချင်သည်။ ကိုယ့်ဖာသာကို ဖယ်လို့ရမလား
သင်သည် IUDဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အွန်လိုင်းဇာတ်လမ်း အချို့ကို ရှာတွေ့နိုင်သည်။ ထိုသ်ု့ကြိုးစားရန် ကျွန်ုပ်တို့အကြံမပြုပါ။ ဒီနေရာမှာအန္တရာယ်ကင်းလားဆိုတာသိဖို့လုံလောက်တဲ့သုတေသနမရှိသေးပါ။ အကယ်၍ IUD ကိုသင်မကြိုက်လျှင် ၎င်းကိုဖယ်ရှားရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံသို့သွားပါက သင့်အား ကိုယ်၀န်တားဆီးခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားရွေးချယ်ခွင့်များအကြောင်း ပြောဆိုနိုင်ပါမည်။.
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက ကျန်းမာသောကိုယ်၀န်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် လုပ်သင့်သောအရာများကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် ပြောဆိုနိုင်သည်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ ကြာရှည်စွာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောအရာကိုလိုချင်ပါက implant သည် နောက်ထပ်ရွေးချယ်ခွင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ငါ့မှာ အိပ်ချ်အိုင်ဗွီရှိနေရင် IUS ကိုသုံးနိုင်သလား။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးရှိနေသောအမျိုးသမီးများသည် ရောဂါလက္ခဏာများဆိုးဆိုးဝါးဝါးမရှိပါက အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးသတ်ဆေးသောက်သောက် မသောက်သောက် IUD ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ 
IUD ရှိပါက ရာသီသွေးစုပ်သောတန်ပွန်တောင့်လေး များကိုသုံးနိုင်သလား။